Esinye sezizathu eziphambili zokonyango lweentsapho kwi-sexologist ukungabikho kwesini kunye nabatshatileyo. Ubudlelwane obusondeleyo buyingxenye ebalulekileyo yomtshato ohambelanayo, ukungabikho kobudlelwane bezesondo akunqabile ukufanelana nabalingani. Kwenzeka ukuba elinye iqabane lilahlekelwe ngumnqweno, kwaye elinye limele libeke.
Abantu abatshatileyo banokuba neengxaki zesini esingazifumani isisombululo, ngenxa yokokuba isondo kwiintsapho ezinjalo ziwela kumanqaku "zero". Abalingani banokufumanisa ukuba kukho izizathu ezimbalwa zokuxabana phakathi kweempawu kunye nokuqala ukuhlala, kungabikho itiye yomnye. Nangona kunjalo, ubudlelwane obuvumelanayo abukwazi ukuba khona ngaphandle kokwabelana ngesondo.
Unokufumana iinkcazelo ezininzi kunye nezizathu zobudlelwane obunjalo, kodwa bahlala befihliwe, kwaye nangona isazi se-sexologist esinamava asikwazi ukubala ngokukhawuleza.
Ingxaki eqhelekileyo ngumnqweno wokukhulelwa umntwana. Amaqabane abelana ngesondo kuphela kwiintsuku ezithile kwaye bacinga ukuba ngumsebenzi wabo, kunye nomnqweno ongaqhelekanga. Abayifumani kwinkqubo yokuzonwabisa kunye nokuphumula. Iingxaki ezinzulu kwintsapho ziqala emva kweenyanga ezintandathu zobudlelwane obunjalo.
Ukukhulelwa kubangelwa yinto yokulahla ngokwesondo. Abafazi bayesaba ukulimaza umntwana ozayo. Umzimba wesetyhini ujongwe kwakhona ukuba ukhulelwe, ngenxa yokuba izinga le libido liyancitshiswa kakhulu. Amaqabane acinga ukuba umyeni kufuneka aqonde imeko yabo, kodwa isiqingatha esisisiseko sabantu asisoloko sivumelana nale, yintoni imbangela yeenkquzulwano, ukulandelelana kwezinto ezingapheliyo. Ngethuba lokukhulelwa, amaqabane kufuneka enze ukulungelelanisa, kwaye akusiyo yonke into yokunqanda umnqweno.
Ukunciphisa umnqweno wesondo ngokobubele kungabangela ukuba uxinzelelo lwangemva kokubeleka. Kubonakaliswa ngokukhathala, iingcamango zokuzibulala, ukuvavanya kakubi kubomi bekusasa elizayo. Isimo sengqondo somfazi emva kokubeleka singasigqubuthelo, ngenxa yokuba ukuphelelwa kanzima, ukukhathazeka okubi kunye nokungabikho kokhenketho lwezesondo akubonakali ngokucacileyo. Ubungakanani bexinzelelo kuxhomekeke kubuhlobo bentsapho kunye namandla okuqhambuka kwe-hormonal. Ngokuhamba kwexesha, yonke indawo, kodwa kukho umngcipheko wokuba isimo sengqondo, impilo okanye i-orbiosis inokuthi ingabuyiselwa.
Ubomi obusondeleyo buchaphazelekayo kwizinto ezininzi, kubandakanywa uxinzelelo, ukukhathala, i-malaise, ukwesaba ukukhulelwa okungafunekiyo, ukutshatyalaliswa kweqabane kunye nokuzithoba. Nangona kunjalo, ingxaki enkulu kakhulu, ngokubhekiselele kwi-sexologists, ngumkhwa. Xa isiqhwithi senkanuko kunye neemvakalelo ziphela, ubudlelwane buba bomelele kwaye bubuqili, abafazi bahlala nganye ngabomi babo. Ulwalamano lobulili luyekile ukuzisa, luba ngumkhwa, kwaye ukungabi nxalenye yempembelelo kuphazamisa umnqweno. Ubundlobongela kwiintsapho ezinjalo lunokuthi lukho njengesiko esinyanzelisayo, kwaye ngokukhawuleza, kwaye unyuke ngokupheleleyo kumaqabane amasha. Ukuba ubudlelwane bezesondo abazange baphumelele, kufuneka bagcinwe, baphuhliswe kwaye bahlale befuthelwa ngumdla.
Ukuze ulungise ubuhlobo, unomnqweno owaneleyo wokwenza ngcono. Nangona xa uthetha nge-sexologist, kufuneka ulungele ukutshintsha, kuba iingcali ziya kunika ingcebiso efanelekileyo malunga nendlela yokuphucula ubuhlobo. Unokulungisa kwakhona ifenitshala kwindlu leyo, fumana uthabatheko olufanayo, uhambe uhambo oluthandanayo, kodwa yonke le mizekelo iza kusebenza kuphela kwezo zibini ezisesimo esihle.
Ukuxazulula iingxaki zesimo sezesondo, kukho nonyango olukhethekileyo lwesayensi yesondo. Idibanisa i-psychotherapy yokuziphatha kunye ne-conjugal, ngexesha apho abafazi bachaphazelekayo, bancedisa ukususa icandelo lezesondo lobuhlobo phakathi kweebherki. Ngenxa yonyango, kudla ngokukhawuleza ukuba izinto ezingalindelekanga zenzeke njengokuthi "ukuxoka", umzekelo, ukuba emva kokuzalwa kwabantwana iqabane libona umfazi njengesihlobo sakhe (unina, udade). Njengomsebenzi wakhe, umyeni ubona kuphela ukunyamekela kweqabane lakhe, isisombululo seengxaki zakhe, kodwa i-taboo malunga nolwabelana ngesondo isetyenziswe kwi-subconscious. Ukujonga okunjalo kwiqabane, akukho mkhwa wesondo, kodwa ukufudumala kobudlelwane kunye nobubele buqhubeka.
Uninzi lwezibini azikwazi ukuyicombulula iingxaki zobomi bobulili bomntu ozimele ngokuzimeleyo, kodwa inyaniso edabukisayo kukuba abaninzi abazami ukuzixazulula, baziqinisekisa bona baphila ubomi obupheleleyo. Ukwabelana ngesondo - isibambiso sobudlelwane beentsapho ezihambelanayo, kwaye ukungabikho kwayo kunokuthelekiswa nokubambezeleka kwebhomu.
Ukuhambelana ngokwesondo ngeqela legazi
Iingcambu ezinobungozi zesini
Ungalungiselela njani i-compote yamajikijolo aqingqiweyo?
Ubuhlobo obusondeleyo nomyeni ongaphambili emva komtshato
Ukufunda indlela yokusebenzisa izimonyo zokuzicoca ngokuchanekileyo